Warshadleyda Dunida Muslimka Ugu Fariidsan Ee Ruushka – Codka Qaranka Tanadland
Makii ay burburtay dowladdii midowga soofiyeeti (26/12/1991) dadyowgii muslimka ahaa ee ku hoos noolaa xukunkii shuuciyada, quruumaha muslimiinta ahi si lixaad leh ayey uga faa’iideen. Ugu horay, faa’iidooyinka ugu muhiisan ee ay muslimku heleena waagaas waxaa ugu waaweyn. 1. Shan iyo tobankii jamuuriyadood ee ay dowladdii soofiyeedku ay u kala baxday 6 ka mid ahi waxay noqdeen dowlado muslim ah, sida (Azerbaijan), (Kazakhstan, (Kirghizia), (Tajikistan), (Uzbekistan) iyo (Turkmenistan).
2. Wadanka ruushka oo ah wadanka dunida ugu dhul weyn oo muslimiintu ku leeyihii todoba jamhuuriyood,
I. (Bashkortostan Republic), II. (Tatarstan Republic), III. (Chechnya Republic), IIII. (Ingushetia Republic), V. (Dagestan Republic), VI. (Kabardino-Balkaria Republic), VII. (Karachay-Cherkessia Republic).
3. Wadnka caalamka ugu weyn ee ruushka cadadka dadkiisu waa 144 malyuun oo qof, 23 malyuun dad ka badan oo ruush ahina waa muslimiin.
Sida uu sheegay (Mufti Talgat Tadjutdin) oo ah hogaamiyaha golaha midowga muslimiinta ruushkuna.
4. Diinta muslimku qawmiyado gaar ah kuma koobna haba loo kala badnaado’e, ee waxaa diinta islaamku wada gaartey 182 qowmiyaddood ee u dalka ruushku ka koobanyahay.
5. Tujaarta iyo warshadleyda ugu waaweyn dalka ruushka oo noqday intii ka danbeysey (26/12/1991) kii dad muslim ah.
Awooda Dadka Muslimka Ahi Ay Ku Leeyihiin Dalka Ruushka :-
Dawladdii midowga soofiyeeti markii ay bur-burtay (26/12/1991) kii ilaha dhaqaalaha ee dalka ruushka waxaa la wareegey dad muslim ah. Tusaale ahaan ninka dalka ruushka lagu sheego inuu ugu taajirsanyahay uguna shirkaddaha badan, oo ah (Alisher Burkhanovich Usmanov) waa nin muslim ah. Ninka shirkaddaha gaarka loo leeyahay ee dalka ruushka shirkadda ugu weyn ee (Luk Oil) iska lihina waa (Vagit Yusuf Alekperov), isaguna waa nin muslim ah. Waxaa kaloo jirta in warshadleyda ugu waaweyn ee dhaqaalaha dalka ruushka gacanta ku haya, ay intooda badan yihiin warshadleyda muslimiinta ruushka. Waxaanna ka soo qaadanayaa sideeda nin ee ugu taajirsan muslimiinta ruushka. Waxaana aan faalo gaaban uga waramayaa shirkadaha ay leeyihiin iyo hantidooda, intii karaankey ah.
Baadariga ugu weyn gaalada ruushka oo la taagan madaxa golaha sare ee mashaa’ikhda ruushka iyo xubno ka tirsan golaha muslimka, Calamada ka danbeeyana waa jamhuuriyaddaha muslimka ah ee ruushka].
Makii ay burburtay dowladdii midowga soofiyeeti (26/12/1991) dadyowgii muslimka ahaa ee ku hoos noolaa xukunkii shuuciyada, quruumaha muslimiinta ahi si lixaad leh ayey uga faa’iideen. Ugu horay, faa’iidooyinka ugu muhiimsan ee ay muslimku heleena waagaas waxaa ugu waaweyn.
1. Shan iyo tobankii jamuuriyadood ee ay dowladdii soofiyeedku ay u kala baxday 6 ka mid ahi waxay noqdeen dowlado muslim ah, sida (Azerbaijan), (Kazakhstan, (Kirghiztan), (Tajikistan), (Uzbekistan) iyo (Turkmenistan).
2. Wadanka ruushka oo ah wadanka dunida ugu dhul weyn oo muslimiintu ku leeyihii todoba jamhuuriyadood,
3. Wadanka caalamka ugu weyn ee ruushka cadadka dadkiisu waa 144 malyuun oo qof, 23 malyuun dad ka badan oo ruush ahina waa muslimiin.
Sida uu sheegay (Mufti Talgat Tadjutdin) oo ah hogaamiyaha golaha midowga muslimiinta ruushku.
4. Diinta muslimku qawmiyado gaar ah kuma koobna haba loo kala badnaado’e, ee waxaa diinta islaamku wada gaartey 182 – ka qowmiyaddood ee u dalka ruushku ka koobanyahay.
Dawladdii midowga soofiyeeti markii ay bur-burtay (26/12/1991) kii ilaha dhaqaalaha ee dalka ruushka waxaa la wareegey dad muslim ah. Tusaale ahaan ninka dalka ruushka lagu sheego inuu ugu taajirsanyahay uguna shirkaddaha badan, oo ah (Alisher Burkhanovich Usmanov) waa nin muslim ah. Ninka shirkaddaha gaarka loo leeyahay ee dalka ruushka shirkadda ugu weyn ee (Luk Oil) iska lihina waa (Vagit Yusuf Alekperov), isaguna waa nin muslim ah. Waxaa kaloo jirta in warshadleyda ugu waaweyn ee dhaqaalaha dalka ruushka gacanta ku haya, ay intooda badan yihiin warshadleyda muslimiinta ruushka. Waxaanna ka soo qaadanayaa lixda nin ee ugu taajirsan muslimiinta ruushka. Waxaana aan faalo gaaban uga waramayaa shirkadaha ay leeyihiin iyo hantidooda, intii karaankay ah.
Warshadleyda Ugu Waaweyn Dalka Ruushka Ee Muslimka Ah :-
(1) (Alisher Burkhanovich Usmanov)
Mudane (Alisher Burkhanovich Usmanov) waxaa lagu sheegaa ninka ugu taajirsan wadamada Ruushka iyo Uk waana nin muslim ah. Hantidiisa shirkadda dhaqaalaha ka faaloota ee Bloomberg waxay sanadkii 2013 -ka ku sheegtay $20.2 billion. Waxayna intaas raacisay in uu jaale (Usmanov) sanadkii 2013 -ka tabcaday hanti dhan $1.3 billion oo macaash ah.
A) Shirkaddaha uu leeyahay (Usmanov) waxaa ugu muhiimsan shirko-horinta (JSC METALLOINVEST), ayna kamid yihiin shirkada ugu weyn ruushka ee macdanta birahaha kala duwan soo saarta (Lebedinsky GOK). Wuxuu kaloo leeyahay shirkadda (Mikhailovsky GOK) oo ah shirkada ugu weyn shirkadaha gaarka loo leeyahay ee birta dhalaaliya. JSC METALLOINVEST waa shirkadda 5 -aad ee ugu weyn caalamka xaga soosaaridda iyo ka ganacsiga biraha kala duwan. Halka ay dalka ruushka iyo wadamada laysku yiraahdo CIS ay tahay shirkadda ugu weyn.
B) Jaale (Usmanov) waa ninka taleefishinada iyo wargeysyada gaarka loo leeyahay ee ugu badan leh. Sida (Muz-TV) oo loo yaqaan tiifiiga fadaraalka ruushka oo xarumo ku leh goboladada dalka oo dhan. 7TV iyo 33 TV.
C) Jaale (Usmanov) wuxuu leeyahay inta badan saamiga shirkadda (Mega Fon) oo ah shirkadda labaad ee ugu weyn taleefanada gacanta ee ruushka.
D) Jaale (Usmanov) wuxuu leeyahay inta badan saamiga shirkadda (Mail.Ru) oo ah shirkadda ugu weyn oo email iyo warbaahinta qadka internetka ay dadka ruushku ka isticmaalaan.
E) Jaale (Usmanov) waa mulkiilaha wargeysyada caalamiga ah ee (Sekret Firmy) iyo (Kommersant Publishing Houses)
F) Mudane (Usmanov) waa mulkiilaha shirkadda (Nautilus Minerals Inc “Nautilus”) oo ah shirkaddii ugu horeysey oo bada hoosteeda macdanbaaris ka bilowda.
Jaale (Usmanov) waa mulkiilaha shirkadda macdanqodista ee (Gallagher Holdings Ltd)
G) Jaale (Usmanov) waa mulkiilaha shirkadda (USM Holdings) oo ah shirkad ay hoosyimaadaan shirkaddihiisa ii dhan.
Xilalka uu hayo mudane (Alisher Burkhanovich Usmanov) :-
1. The President of USM Holdings.
2. Chairman of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs Committee.
3. The President Of International Body Of Fencing, FIE
H) Mudane (Usmanov) waa mulkiilaha shirkadda guryeynta iyo dhismaha ee (Abbey PLC) oo u sanadkii 2008 ka gatay Santander Bank. Shirkadda (Abbey PLC) waa shirkad shorko-horin ah oo balaaran. Shirkddu waxay ka
koobantahay dhawr shirkaddood oo kalah ah (Abbey New Homes), (kingscroft Developments), (M & J Hire Centres), (Abbey SRO “Prague”). Shirkddaha (Abbey New Homes), (kingscroft Developments) iyo (Abbey SRO “Prague”) waa shirkaddo degaameynta ka beecmushtara. Waxayna xarumo waaweyn ay ku leeyihiin oo ay ka hawlgalaan wadamada Irland, UK Iyo Czech Republic. Shirkadda (M & J Hire Centres) waa shirkad noockasta oo qalabka dhismaha ah kireysa.
(2) Vagit Yusuf Alekperov – $60 billion
Dad badan ayaa waxay rumaysanyihiin in ninka iska leh shirkadda ugu weyn shirkaddaha gaarka loo leeyahay ee dalka ruushka oo ah shirkadda baaxadda weyn ee (Luk Oil), in uu yahay ninka dalka ruushka ugu taajirsan. Shirkadda (Luk Oil) ha ahaato shirkadda ugu weyn shirkaddaha gaarka loo leeyahay ee ruushka, balse waxaa taas u wehesha waa shirkad muhiimad weyn u leh dalka ruushka. Sidoo kalena ahmiyad balaaran ugu fadhida dunida muslimka. Tusaale ahaan, hadii qasdiga reer galbeedku ay u weerareen dalka Ciraaq uu ahaa inay qayraadka dhulkooda ku jira ay dhacaan, taasi uma aysan suuragelin waana ay ku hungoobeen.”Guushaasna waxaa u sabab ahayd shirkadda (Luk Oil)”. Dowladda ruushku waxay ku dadaashey iyada oo la kaashanaysa dowladda Iiraan, in qandaraasyada ugu muhiimsan ee soosaarida iyo sahaminta shidaalka Ciraaq la siiyo shirkadda (Luk Oil).
Shirkadda (Luk Oil) waxaa qandaraas lagu siiyey oo ay heleen wixii shirkaddaha reer galbeedku ay shirkaddahooda u raadinayeen. Galbeedka (Qurna-2 oilfield) oo ka mid ah meelaha kaydka ugu badan ee shidaalka dunida uu ku jiro, waxaa la siiyey shirkadda (Luk Oil). Taasoo guul weyn u ah dunida muslimka iyo dalka ruushka. Teeda kale, shirkadda (Luk Oil) waa shirkadda ugu weyn ee uu leeyahay qof muslim ah uuna madax ka yahay. Sanadkii 2013 – ka shirkadda (Luk Oil) daqliga u soo xerooday wuxuu ahaa $141.45bn. Kobaca macaashkeeduna wuxuu ahaa 1.64% in ka badan intii ay samaysay sanadkii 2012 – da. Shirkadda (Luk Oil) waxaa u shaqeeya 170.000 oo qofood. www.lukoil.com
Qiimaha shirkadda (Luk Oil) :
Shirkaddaha aduunka ee khiimaha leh oo suuqyada caalamiga ah ka diiwaan gashan sanad kasta waa la qiimeeyaa. Laakiin shirkadda ugu weyn shirkadaha gaarka loo leeyahay dalka ruushka ee (Luk Oil) weli waa la qiimeyn la’yahay. Waana ay adagtahay in la qiimeeyo sababta oo ay tahay kaydadka ugu badan ee la ogyahay ee gaaska iyo badroolku ay ku jiraan ee dalka ruushka waxaa iska leh (Luk Oil). Waxay shirkadda (Luk Oil) sidoo kale ay qandaraas u haysataa soosaarida kaydad waaweyn oo ku yaala wadanka (Aserbajan) oo ay ku jiraan badrool iyo gaas. Wadanka (Aserbajan) na waa wadanka uu ka soo jeedo mulkiilaha shirkadda (Luk Oil) jaale (Vagit Yusuf Alekperov). Marka waxaa si sax ah loo qiimeynkaraa hantida (Vagit Yusuf Alekperov) marka la qiimeeyo hantida shirkadda (Luk Oil).
Shirkadda (Luk Oil) Iyo Hantida Ay Ku Leedahay Dunida Inteeda Kale :-
Shirkada (Luk Oil) wadanka Ciraaq oo keliya waxay ku maalgelisey $20 bilyan (West Qurna-2 Oil field) oo ah kaydka labaad ee ugu weyn dalka ciraaq. Iyadoo qorsha shirkadda (Luk Oil) uu ahaa in wax soosaarka badroolka dalka ciraaq la gaarsiiyo sandka 2014 -ka halkii uu joogey 30 nano ka hor. Taariikhdu markii ay ahayd 28/03/2014 shirkada (Luk Oil) waxay biloday soosaarida shidaalka (West Qurna-2 Oil field). Intii maalintaas ka danbeyseyna waxay maalin kasta soo saareysey 120,000 oo barmiil maalintiiba. Sida uu sheegay jaale (Gennady Budarin) oo ah maareeyaha wax soosaarka shirkadda (Luk Oil) ee dalka Ciraaq. Wuxuuna intaas raaciyey inay soosaarida badroolka marba-marka ka danbeeya ay siyaadinayaan, oo u qorshahoodu yahay in sanadkan aynu ku jiro ee 2014 -ka dabayaaqadiisa ay soo saaraan 400,000 oo barmiil maalintiiba.
Shirkadda (Luk Oil) si ay ugu suuragasho soo saarida 400,000 oo barmiil waxay ku talojirtaa, in mudo 3 sano gudahood ah tirada ceelasha ay (West Qurna-2 Oil field) ka qodo ay gaarsiiso 459 oo ceel. Mideeda kale, shirkada (Luk Oil) waxay u suuragelisey dalka ciraaq in cadadka shidaalka ay hada soo saarto uu gaaro 3.6 malyuun oo fuusto maalintiiba. Ayna ciraaq noqoto wadanka labaad ee badroolka ugu badan dunida u iib geeya oo ku xiga dalka sucuudiga.
Yurubta Bari Iyo (Luk Oil)
Shirkadda (Luk Oil) waxay mudo dheer ahayd shirkadda ugu balaaran ee batoolka ka iibisa wadamada (Hungary), (Slovakia), (Czech republic) iyo (Ukraine). Waxay kaloo ay shirkadda (Luk Oil) ku lahayd wadamadaas shidaaleyaasha ugu badan ee ku yaala wadamadaas. Balse labadii bilood ee ina dhaafay ayey kuligood iibisey oo shirkado kale ay ku wareejisey.
USA Iyo (Luk Oil)
Shirkadda (Luk Oil) waa shirkaddii ugu horeysey oo ruush uu leeyahay oo iibsata shirkad marykan uu leeyahay oo shidaalka ka ganacsata. Sanadkii 2000 -ka shirkada (Luk Oil) waxay iibsatey shirkad la oranjirey (Getty Petroleum). Taasi waxay shirkadda (Luk Oil) u suuragelisey inay 2800 oo shidaale ku yeelato gobolada (New York state), (New Jersey), iyo Pennsylvania). Shidaaleyaashaas oo 500 oo ka mid ah ay sumadda shirkadda (Luk Oil) ay ku taalo. Inta kala sumadda shirkadda (Getty Petroleum) ay ku taalo.
Sidoo kale, (Vagit Yusuf Alekperov) waa nin qoraa ah wuxuuna qoray buuga caanka ah ee la yiraahdo “Oil of Russia: Past, Present and Future.”
(3) Suleyman Abusaidovich Kerimov – US$7.1 billion (March 2013)
Mudane (Suleyman Abusaidovich Kerimov) oo ahaanjirey mudo dheer gudoomiye ku xigeenka aqalka sare dalka Ruushka, mudo dheer waxaa looyaqaaney ninka ugu taajirsan golaha sare ee senetarada dalka ruushka. (Suleyman) wuxuuna leeyahay shirkaddo dhawr ah oo ay ka mid yihiin shirkadda maaliyadda ee (Nafta Moskva), Shirkadda diyaaradaha iyo xamuulka ee (Vnukovo Airline), (Virgin Islands-registered Girol Consolidated Inc), (Cyprus registered Demoginet LTD) iyo (Polyus Gold International Limited (LSE:PGIL). Sidoo kale, Mudane Suleyman waa mulkiilaha daarta labaad ee ugu dheer qaaradda yurub ee la yiraahdo (Eurasia Tower). Daarta keliya ee ka dheerina waa waa daarta la yiraahdo (Mercury City Tower). Labada daarood ee qaaradda yurub ugu dheerina waxay labaduba ku yaaliin faras magaalaha magaalada Moscow.
1. Shirkadda (Polyus Gold International) waa shirkadda ugu weyn shirkaddaha gaarka loo leeyahay ee dalka ruushka oo ka ganacsata sahaminta, soosaarida iyo dhalaalinta iyo suuqgeynta dahabka. Shirkadda (Polyus Gold International) waa shirkadda ugu muhiimsan ee suuqyada London iyo Moskow ascaarta dahabka saameynta ugu weyn ku leh, Maadaama ay xadi aad u badan oo dahab ah ay marba marka ka danbaysa ay soo saaraan. Sidoo kale, shirkadda (Polyus Gold International) waa shirkadda ugu wey oo u qof muslim ahi leeyahay oo nooceeda ah. www.polyusgold.com
[Daarta labaad ee qaaradda yurub ugu dheer “Eurasia Tower” oo u weli dhisme ku socdo, Daartaan oo uu iska leeyahay Senater Suleyman Abusaidovich Kerimov].
2. Shirkadda (Nafta Moskva) waa shirkad maaliyadeed oo maalgelin ku samaysa ilaha dhaqaalaha ee muhiimka ah sida Badroolka, Macdan Qodida, Wershadaha mcdanta dhalaaliya, Guryeynta “Real Estate”. iyo Warbaahinta. Waxay kaloo Shirkadda (Nafta Moskva) maamushaa shirkaddaha kale iyo maalgelimaha uu Suleymaan leeyaahay oo dhan
3. Taariikhdu markii ay ahayd 18/01/2011 (Suleyman Abusaidovich Kerimov) kooxda kubadda cagta ee (Anzhi Makhachkal) oo saldhigeedu uu yahay caasimadda jamhuuriyada Dagestan ee midowga ruushka. Kooxda (Anzhi Makhachkal) oo loogu magacdaray caasimadda Dagestan ee Makhachkal macnaheedu waa (Gorgorka Makhachkal). Intii uu (Suleyman) iibsadey (Anzhi Makhachkal) kooxdu waxay noqotay kooxda ugu caansan horyaalka kowaad ee dalka ruushka, ayna u ciyaaraan cayaartoyada ugu qaalisan ee ajnebiga ah. Sida (Samuel Eto) oo noqday cayaartoyga ugu qaalisan dalka ruushka oo lagu kireystey 60m. Cayaartoyga caanka ah ee (Roberto Carlos) iyo tababare (Guus Hiddink).
(4) Mikhail Safarbekovich Gutseriev – $6.7 billion.
Mikhail walow uu yahay ninka afraad ee ugu taajirsan wershadleyda muslimka ah ee ruushka, hadana waxaa la orankaraa waa ninka labaad ee ugu caqliga badan. Sababta oo ay tahay wuxuu leeyahay shirkadda labaad ee ugu muhiimsan shirkaddaha ay leeyihiin warshadleyda muslimku oo ah shirkadda (Russneft). Mideeda kalana, (Mikhail Safarbekovich Gutseriev) waa nin gabayyaa ah. Shirkadaha uu leeyahayna waxaa ka mid ah (Russneft Oil Company), (Neftisa Oil Company), (Exillon Energy), (OAO ”Russian Coal”), (GCM Global Energy).
1. Russnef – Shirkadda gaaska iyo batroolka ee (Russneft) oo uu sameeyey Mikhail sanadkii 2002 -ka, Waa shirkadda sideedaad ee ugu weyn shirkadaha gaaska soo saara ee dalka ruushka. Dhanka batroolkana waa shirkadda tobnaad ee ugu weyn shirkaddaha badroolka soo saara. Sidoo kale, shirkadda (Russneft) oo ah shirkad cusub ah oo 12 sano oo keliya jirtey waxaa u shaqeeya 20,000 oo ruush ah. www.eng.russneft.ru
2. Neftisa – Shirkadda gaaska iyo badroolka ee (Neftisa) waa shirkad cusub oo la sameeyey (07/04/2008) waana shirkad yar oo lagu qiimeeyey hantideeda $2 billion markii la bilaabay. Shirkadda sida websaydkeeda ku qoran waxay hawlaheedu ay ku koobanyihiin sahaminta, soosaaridda, wershadeynta gaaska iyo badroolka. Waxayna shirkadda (Neftisa) hawlaheedu ku koobanyihiin dalka ruushka gudihiisa. Shirkadda (Neftisa) sanadkii 2013 daqliga u soo xerooday wuxuu kor u kacay 52% oo ah RUB 71.693 billion halka uu sanadkii hore ahaa RUB 47.295 billion.
Sanadkaan aynu ku jiro bilowgiisii, shirkadda (Neftisa) waxay iibsatey shirkad kale oo la yiraahdo (JSC Udmurt Oil Company) magaceediina wuxuu isurogey (OJSC NK Neftisa). www.neftisa.ru.com
3. OAO ”Russian Coal” – Shirkadda (OAO ”Russian Coal”) waa shirkad meeldhexaad ah oo dhuxuldhagaxda ay soo saarto inta budaysa oo gubta tamarta ka dhalata koronto u bedasha, korontadana magaalooyinka ka iibiya.
4. GCM Global Energy – Shirkadda (GCM Global Energy) waa shirkad wadanka UK xarunteedu ay ku taal oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada ka beecmushtara. Shirkadda (GCM Global Energy) waxay wadanka Uk ay ku leedahay wershado la mid ah kuwa ay dalka ruushka ku leedahay. Waxayna wershedahaas ay ku isticmaashaa dhuxuldhagaxda daqiiqda ah ee ay samayso shirkadda (OAO ”Russian Coal”). Waxayna (GCM Global Energy) ay wadanka Uk ay ku samaysaa koronto aad u jaban. www.gcmplc.com
5. Exillon Energy – Shirkadda (Exillon Energy) waa shirkad yar oo ay lahaanjireen ganacsato reer Uk ah. Ganacsatada iska leh Shirkadda (Exillon Energy) waxay dowlada ruushka ay qandaraas uga qaateen labo kayd oo bedrool uu ku jiro inay soosaaridiisa maalgeliyaan. kaydad kaas oo ku yaala labo gobol oo waqooyiga dalka ruushka ku yaala. Iyadoo ay saas tahay ayaa hadana waxaa jirta in wadamada reer galbeedka iyo iyo ruushka uu ka dhexdilaacay dagaal dhaqaale oo aad u xun. Dowladaha reer galbeedku waxay cunaqabatayn saareen shirkaddaha 50% iyo wixii ka badan ay dowladda ruushku leedahay. Markaas ayaa waxaa dhacday in shirkadda gaarka loo leeyahay ee ugu weyn dalka ruushka oo ah shirkadda (Luk Oil), in ay labo bilood gudahood hantidii ay ku lahayd wadamada xulufada la ah maraykanka ee yurub ay xaraashto.
Shirkadda (Luk Oil) markii ay xaraashtay hantidii ka taaley wadamada la siyaasadda ah US, ayey dowladda ruushku cunaqabatayntii la saaray mid ka xun ay duldhigtay reer galbeedka. Ruushku todobaadkaan wuxuu cunaqabatayn saaray Midowga Yurub, US, Canada, Australia iyo Norwey. Waxaana dalka ruushka laga mamnuucay inay soo galaan, Qudradda, Miraha, Hilibka, Kaluunka, Caanaha iyo wayaabaha caanaha laga sameeyo ee laga keenijirey wadamadaas.
Marka Dagaalka dhaqaaluhu wuxuu marayaa in wixii cadaan ah la kala qaato, wixii hanti maguurto ahna la xaraasho inta uusan xaalku meel xun gaarin oo ganacsatada labada xulufo aanay xooluhu ka guban. Marka intii ay xiisaddu socotey bilihii ugu danbeeyey ee sanadkaan aynu ku jiro ee 2014 -ka ayaa shirkadda (Exillon Energy) la xaraashay, oo uu jaale (Mikhail Safarbekovich Gutseriev) la soo wareegey.
6. Hantida ninka labaad ee warshadleyda muslimka ruushka ugu fariidsan intaas kuma koobna, jaale (Mikhail Safarbekovich Gutseriev) wuxuu sanadkii 2012 uu iibsadey 7 idaacadood oo wadanka ruushka jamuuriyadihiisa ku kala yaala. Wuxuu leeyahay moolal waaweyn sida (Petrovskiy) iyo (Smolenskiy Passage). Wuxuu kaloo leeyahay hoteelka hoteelada magaalada Mosko ku yaala ugu qurxoon ee (National Hotel).
Mideeda kale, Xariifnimada abwaan (Mikhail Safarbekovich Gutseriev) intaas kuma ay koobna, Sanadkii 2006 -da (Mikhail) waxay isqabteen madaxweynaha jamuuriyadda Dagestan oo ay xulufo yihiin madaxweyne Putin. Sida la sheegayna nin kale oo mslim ah ayaa (Mikhail) wuxuu u sameeyey kiis been ah oo ah in uusan canshuurtii lagu lahaa uusan wada bixin. Markaas ayuu inta (Mikhail) shirkadihiisii nin uu ku kalsoonyahay u dhiibtey wuxuuna yiri waan ka gaday oo uu magiciisii ku qoray. Dabeed inta uu ruushka ka duulay ayuu magaalada London uu degey. Wakhtiga uu magaalada London tegey waxay ahayd sanadkii 2007 -kii. Berigaas waxaa la yaab lahayd in warbaahinta muslimka neceb oo aan soo hadal qaadin wershedleyda muslimka ee ruushka marka ay ka hadlayaan diintooda, inay arinta (Mikhail Safarbekovich Gutseriev) oo ahayd arin aad u sahlan oo labo qof oo muslim ah ka dhexaysa. Ay warbaahinta yuhuudu ku sheegeen in ninkii warshadleyda muslimka ruushka ugu weynaa hantidiisii dowladda ruushku ay kala wareegtey, isaguna uu wadanka Uk magangalyo siyaasadeed uu weydiistey. Sida maqaalka uu qoray (Ben Aris) oo ka mid ah dooliyada wax ku qora wargeyska dooliyadu ay leeyihiin ee (Guardian).
Laakiin run ahaantii waxaa dhacday in (Mikhail Safarbekovich Gutseriev) islamarkiiba uu dalkiisii ku noqday, oo isagoo aan wax maxkamad ah aan marin dacwadii loo haystey la cadeeyey inay ahayd waxkamajiraan. Uuna isla markiiba shirkaddihiisii ninkii uu u dhiibtey kala soo wareegey isagoo sheegtay inuu dib uga gatay oo uu lacag bixiyey.
(5) Megdet Nigmatovich Rahimkulov – $1.4 Billion
Jaale (Megdet Nigmatovich Rahimkulov) waa ninga ugu taajirsan tujaarta wadanka Hungery wuxuuna leeyahay bankiga ugu weyn ee dalka Hangery ku yaala, bangigaas oo ah (OTP Bank). Mudo dheer (Megdet) wuxuu ahaa madaxa ugu sareeya shirkaddashirkaddaha ruushka ugu baaxadda weyn ee Gaspron iyo shirkadda (Panrusgas) oo uu isagu leeyahay. Wuxuu kaloo uu madax ka ahaanjirey bangiga (RT kforgalmi Bank) oo uu lahaanjirey intuusan iska gadin. Wuxuu ka mid yahay saamileyda ugu waaweyn ee shirkadda Gaspron oo ah shirkadda ugu weyn ee dunida gaaska u dhoofisa. Wuxuu kaloo leeyahay shirkadda (Russian financial group VTB)
(Megdet) hantidiisa iyo shirkadihiisu waxay hoosyimaadaan oo maamula shirkadda (Russian financial group VTB). Shirkadda Gazpron oo yurub inteeda badan gaaska siisa maadaama uu ka mid yahay raga ugu sheerka badan, Sanadkii 1990 -kii markii shirkadda Gazpron iyo shirkadda Hungarian Oil ay ku heshiiyeen n iskaashato wadanka oo dhan gaaska ruushka fafaariiq iyo jimlaba u gada ay sameeyaan. Shirkadii ay sameeyeen waxay ahayd shirkadda (Mol). Shirkadda (Mol) na markii la sameeyey saamiga ugu badan oo ahaa 10% waxaa gatay (Megdet Nigmatovich Rahimkulov) ,Waxaana madaxweyne ka noqday isla isaga
Markaas kedib Gazpron waxy iibsatey bangiga (Altalanos ErtekForgalmi Bank) si ay ugu maareyso hawlaha macaamiisheeda. Dabeed Bangiga (Altalanos ErtekForgalmi Bank) ka iibsadey Gazpron Megdet.
(6) Roustam Vasilevich Tariko – $2.3 Billion
Ninka lixaad ee aan maqaalkaan ku soo qaatay in aan uga hadlo oo ka mid ah warshedleyd ugu waaweyn dalka ruushka, maaha ninmuslin ah mana u aha nin muslim lagu sheegikaro, walow qormada duluxdeedu ay isaga ku qotanto. Jaale (Roustan Tariko Hantidiisa) aabihiis iyo hooyadiisba waa dad muslim ah. Qawmiyad ahaana waxay isku qawmiyad yihiin (Megdet Nigmatovich Rahimkulov) oo ah ninka wadanka (Hungery) ugu taajirsan, iyo (Rinat Leonidovych Akhmetov) oo ka mid ah raga qaaradda yurub ugu taajirsan lehna wershadaha, Bangiyada, Shirkaddaha isgaarsiinta, warbaahinta iyo shirkaddaha ugu waaweyn dalka (Ukrain). Wuxuuna ka soo jeedaa qawmiyadda (Tar-tar) ka ee ugu badan qawmiyadaha muslimka ah ee ruushka.
Mudane (Roustam Vasilevich Tariko) waa nin diintiisii lagu ababiyey lacag ka doortay shaqsiyan, Waa mulkiilaha bangiga bangiyada ruushka ugu weyn ka mid ah ee (Russian Standard Bank). Jaale (Roustam) waa nin ganacsade weyn ah oo bangi weyn iyo ganacsiyo kale leh sida (ZAO Rust Inc) iyo (Miss Rus Company).
Bangiga (Roustam Vasilevich Tariko) ee Russian Standard Bank oo u aas-aasay sanadkii 2000 – ka waa bangigii ugu horeeyey oo ruush leeyahay oo macaamiishiisa deyn amaahiya. Bangiga (Russian Standard Bank) oo lagu tiriyo bangiga ugu macaamiisha badan bangiyada ruushka ee gaarka loo leeyahay. Waa bangiga ugu muhiimsan wadanka ruushka oo macaamiisha amaahda siiya, Waxaana lasheegay in uu haysto 77% macaamiisha deynta qaata dalka ruushka. Dadka (Russian Standard Bank) macaamiisha u ah ee kaarka bangiga deynta looga qaato haystana waxa weeyee 240 malyuun oo qofood. Arintaas oo wax lala yaabo ah marka cadadka tirada dadka ruushka loo eego. www.russianstandardbank.com
Balse waxaa taas ka siidaran oo uu leeyahay (Roustam Vasilevich Tariko) shirkadda ugu balaaran dunida ee soo saarta qamrada loo yaqaano vodka. Shirkad daasina waa shirkadda qamrada dilaaga ah soo saarta ee (Russian Standard vodka). www.russianstandardvodka.com
Taariikdu markii ay ahayd 16/10/2003 waxaa magaaladda (Putrajaya) ee dalka maleysiya ka furmay shirmadaxeedkii dunida muslimka. Shirkaasna waxaa ka qaybgalay madaxweynaha dalka ruushka (Vladimir Putin). Faladamir Putin shirkaas wuxuu ka jeediyey qudbad dad badani ay ka nexeen. Madaxweyne (Fladamir Putin) wuxuuyiri “Ruusahku waa quwad muslim ah oo rajeyneysa inay doorkeeda ka qaadato arimaha dunida muslimka. www.economist.com
Marka uu saas leeyahay madaxweyne (Faladamir Puttin) labo sanadood ka hor waxaa shir jaraa’id qabtay (Talgat Tadjutdin) oo ah hogaamiyaha golaha sare muftiyada muslimka ruushka. Wuxuuna soo jeediyey in astaanta dalka ruuska la bedelo oo la sameeyo astaan qaran oo ka kooban labada astaamood ee dadka ruushku ay leeyihiin. Taasoo ah bisha islaamka iyo mactabadda gaalada.
Buuga Uu Qoray ninka La-diidka (Refusenik) Ah Ee “Implosion: The End of Russia and What It Means for America by Ilan Berman”
Intaasi markii ay dhacday oo ( Shiikh Talgat Tadjutdin) iyo madaxweyne (Faladamir Puttin) ay hadleen, ayaa buug iskudir ah oo muujinaya sida uu uga xunyahay awooda kordheysa ee muslimka ruushka, waxaa qoray nin La-diid (Refusenik) ah oo la yiraahdo (Ilan Berman). Buugaasi wuxuu noqday wax aan micno lahayn oo laga gadanwaayey. Sababta oo ay tahay (Ilan Berman) waa dadka dalka ruushka lagu gumeysanjirey ee dadka ruushku ay u yaqaaniin (Refusenik). Taas oo u macnaheedu yahahay “La-diid”. Intii ka horeysey (26/12/1991) -kii dadka looyaqaan La-Diidka (Refusenik) mabnuuc ayey ka ahayd in ay labo magaalo oo isu muuqda ay isaga talaabaan. Marka ay shrciga jebiyaan oo ay magaaladii lagu ogaa intay ka tagaan magaalo u muuqata lagu qabtana cinqaab xun ayaa lamarsiinjirey. Makii ay burburtay dowladdii midowga soofiyeeti (26/12/1991) ayaa (Ilan Berman) iyo dadkiisu ay xoroobeen oo ay falastiin iyo maraykanka ay u kala qexeen. Marka uu buuga iskudirka ah uu qoray (Ilan Berman) waxay ahayd (02/11/2013) mudadaas oo ku beegan hal bil oo keliya markii uu ka hadlay madaxweyne (Faladamir Puttin) shirkii madaxda dunida muslimka ee lagu qabtay magaalada (Putrajaya). Taasi waxay ku tusaysaa degdega uu (Ilan Berman) oo ah gudoomiye ku xigeenka siyaasada arimaha debeda ee maraykanka uu mala’awaalkiisa ku qoray.
Maadaama uu (Ilan Berman) yahay nin ku soo barbaaray dalka ruushka uuna xog-ogaal u yayhay awooda dhaqaale iyo mida shacbiyadeed ee muslimka ruushka. Wuxuu tilmaamahayaa hoos u dhaca tirada dadka gaalada ah ee ruushka. Wuxuu kaloo u soo qaatay in dadka muslimka ah ee ruushka ay tiradoodu si xaddhaaf ah u kordheyso. Wuxuuna saadaaliyey modo hada 5 sano wax ka yar laga joogo in ruushka gaalada ah ay noqondoonaan 25%. Taasoo ah runtii wax lagu qoslo. Dadka ruushka ahi waa ay ogyihiin in dhaqaalaha dalkooda ay gacanta ku hayaan warshedleyda muslimku. Waxay dadka ruushka ahi sidookale ay ogyihiin in ninka iska leh shirkadda soo saarta qamrada ugu badan ee dalka ruushka laga cabo in uu leeyahay (Roustam Vasilevich Tariko). Nin kaas oo ka soo jeeda qawmiyad muslim ah. Marka ninka yuhuudka ahi wuxuu buugiisa gundhig uga dhigayaa sababta ay muslimiintu wadanka ruushka gaalada ugala wareegayaan.
1. Dhalmada dadka gaalada ah ee ruushka oo aad u yar taasoo ah wax xaqiiq ah oo jirta sanad kasta.
2. Qamrada dilaaga ah ee looyaqaan (Vadka) da oo la ogyahay inay raga gaalada ah ee ruushka ay baabi’iso.
Marka (Ilan Berman) wuxuu ku eedaynayaa muslimka ruushku inay xeelad ay ku laynayaan gaalada ruushka.
Russia’s Slavic population to account for only 25 percent by 2020?
Qormadaan Dheer ee aan uga faaloonayo cududa dhaqaale ee warshadleyda muslimka ruushka, oo ah warshadleyda ugu fariidsan warshadleyda dunida muslimka oo dhan. Waxaan ku soo gabagabeynayaa. Qormada waraysi ra’iisalwasaare (Vladimir Putin) uu la yeeshay (Vagit Yusuf Alekperov) madaxweynaha shirkadda (Luk Oil). Waraysigaas oo uu (Vagit Yusuf Alekperov) ku sheegtay inay shirkaddiisu samayso maraakiibta aduunk ugu waaweyn ee shidaalka qaada. Shirkadiisuna ay shidaalka ka soo saarto dhulal heerkulka qabowgu uu yahay inta u dhexaysa – 20C ilaa -60C. Heerkulka qabowgu marka uu gaaro -20C na waa heerkulka uu badroolku barafka ku noqdo. Taasoo uu sheegay in wadamada kale ee shidaalka soo saara ee dunidu inaysan awood u lahayn, inay degaamo sidaas u qabow inay shidaal ka soo saaraan. Waraysigaas oo lagu baahiyey websaydka xafiiska dalka ruushka looga taliyo ee ra’iisalwasaare (Vladimir Putin). www.kremlin.ru
Waxaan kaloo intaas idiinku darayaa Wadanka ugu dambeeyey oo qaaradda Afrika ee ay maalgelinta ku samaysay shirkadda (Luk Oil), Wadankaas oo ah wadanka (Sierra Leone). Oo la filayo in shirkadda (Luk Oil) ay badrool ka soo saarto maalgelinna ay ku samaysay. www.offshoreenergytoday.com
Sodon iyo kowgii bishii ina dhaaftay ee sanadka 2014 -ka sidaynu warbaahinta caalamiga ah ka daawanay qaarkeen, Madaxweyne (Vladimir Putin) wuxuu abaalmarino gudoonsiiyey shaqsiyaadka bulshada ruushka ugu fir-fircoon. Sida cirbixiyeyaal, joornaaliisteyaal, Sharci dejiyeyaal iwm. Mulkiilaha Shirkadda (Luk Oil) mudane (Vagit Yusuf Alekperov) na wuxuu ahaa ninkii biladda ugu saraysa lagu abaalmariyey warshedleyda ruushka. Bilad daas oo ah bilada hawlkarnimada ” Distinguished Service Order Medal Of Russia).